Kutarisa: Email Kushambadzira neDelivra | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 28, 2011 NeChishanu, Gumiguru 28, 2011 Douglas Karr
Isu tinodada kuve naDelivra seiye tsambambozha Marketing anotsigira Martech. Kune toni yeemail yekushambadzira vatengesi munzvimbo ... nepo mamwe acho aine zvishandiso zvakaomarara, mazhinji acho anongotsamira pane zvechisimba zvekutengesa maitiro uye kumanikidza kuburikidza nevatengi vakaita seopenga. Delivra yave iripo kubva pakauya kushambadzira kweemail uye yakura nekushanda nesimba kubatsira vatengi vayo…. uye mhedzisiro inoratidza!
Delivra ndeye Inc.com 5000 kambani uye ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushandira muIndiana! Vakura 98% mumakore matatu apfuura uye iri timu rinoshamisa revanhu vane hanya nekubudirira kwevatengi vavo. Mumakore gumi andakagara muIndipolis, hapana chandakanzwa kunze kwezvinhu zvikuru nezvekambani nevashandi vavo.
Kubva pawebhu peji ravo:
Delivra ibhizimusi-risina chikwereti, bhizinesi repachivande uye rinoshanda riri mumoyo weMidwest - uye iwo akadzika-epamusha tsika dzekutendeseka, kuvimbika, uye kushanda nesimba kunozadza musangano. Izvi zvinoreva kuti hatisi kuona kune mumwe mutengi kana mutengesi: isu tinokwanisa kuita izvo zvakanakira vatengi vedu uye nevashandi vedu pasina imwecheteyo "yepasi-mutsara" kumanikidza aripo mune akawanda emakwikwi edu.
Mamwe makambani anotaura nezvebasa revatengi - kuDelivra tinoenda zvakanaka kupfuura miromo. Sangano rese rakaumbwa kubva pasi kumusoro nemutengi achifunga. Paunongotanga account neDelivra, unotanga hukama newaunovimba naye wakanangana nekukuita kuti utaridzike. Iwe haufone kuenda kunzvimbo yekufona yekumahombekombe kana kufanirwa kufamba nemakumi emafoni ekukurudzira kuti utaure nemunhu asingakuzive: iwe uchaziva ZITA remunhu wauchazodaidza uye munhu iyeye achaziva zvako!
Kutenda kushamwari dzedu pa 12 Nyeredzi Media kune imwe inoshamisa vhidhiyo kutarisisa kambani yeKushambadzira Technology. Kana iwe uchida kuti kambani yako ibvunzurwe kana ungade kuendesa yako vhidhiyo, ndapota taura nesu!